”ညီလေးကို ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ဖတ်စေချင်တဲ့ ကဗျာ”
အင်း...တော်ပေသေး၏။ ညီမောင်မျိုးလို ”ဝါသနာ”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်မျိုးနဲ့အတဂ်မခံရပေလို့။
လောလောဆယ်တော့ ကိုရင်နော်နဲ့ ညီမခင်လေးငယ်က ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ တဂ်သွားလို့ ပေါ့
ပေါ့ပါးပါးပဲ မနှစ်တုန်းက ရေးထားတဲ့ပို့စ်အဟောင်းတွေထဲက ကဗျာလေးတပုဒ်ကို ပြန်ရှာ
ပြီးတင်ပေးလိုက်နိူင်သွားပါတယ်။ ညီမောင်မျိုးကိုတော့ သူတဂ်ထားတာမရေးနိူင်သေးလို့
အားနာပါးနာနဲ့ပဲ တောင်းပန်ပါရစေ။ ညီလေးရေ..လာမယ်..ကြာမယ်...ဖြေးဖြေးပေါ့ကွာ
အကိုက ဝါသနာပါတာတွေ များလွန်းလို့ ဘယ်ကစပြီး ရေးရမှန်းမသိဘူး ဖြစ်နေတယ်..
သီချင်းဆိုဝါသနာပါတာက စပြီးရေးရမလား. ကဗျာရေးဖတ်ဝါသနာပါတာက စပြီးရေးရ
မလား. ကောင်မလေးတွေကို ရည်းစားစကားပြောတာ ဝါသနာပါတာက စပြီးရေးရမလား
စသဖြင့်...စသဖြင့်တွေများနေလို့ပါ...အခုတော့ ကိုရင်နော်နဲ့ ညီမခင်လေးငယ်တို့ တဂ်ထား
တဲ့ ဆားချက်ပို့စ်ကဗျာလေးကိုပဲ ပြန်ဖတ်ရင်း ကျေနပ်တော့ကွာ.....
အနှစ် ၂၀ ကျော်ကြာ ခေတ်စားနေခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှာ
ဂျော့ဝါရှင်တန်ဟာ လှလှပပ ပြန့်ကျဲကျသွားတယ်…..
ရာသီပေါင်းများစွာထဲက ကိုယ့်ရဲ့ ရင်ဘတ်အနာနဲ့ ရင်းခဲ့ရပြီး….
မင်းမှာသာ ခံစားတတ်တဲ့ နှလုံးသားရှိရင်
လုံခြုံအောင် သိမ်းဝှက်ထားတဲ့ သိက္ခာနဲ့
သူတို့ဆိုတာက မင်းတို့ ကိုယ်တို့လိုပါဘဲ
ခေါင်းလည်တမော့မော့နဲ့ နိူင်ငံရေးကို ဟစ်ပ်ဟော့ပ်တပုဒ်လိုဟစ်
တော်လှန်စစ်ကို သေရည်တခွက်နဲ့ ဖျော်သောက်
မူးလာတဲ့အခါ မြေပုံတစ်ချပ်ပေါ်မှာ ဗိုက်မှောက်အိပ်ရင်း
ချို့တဲ့နေတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ အကြောင်းကို
နာစရာဆို ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းနဲ့ ကြိတ်ခံမရနိူင်တဲ့
မင်းတို့ ငါတို့ရဲ့ သမိုင်းစာမျက်နှာတွေထဲ
ဆောင်းယွန်းလ၏ ရင်ဘတ်မှလာသော ခံစားချက်အစစ်အမှန်ဖြစ်၏။
Posted by ဆောင်းယွန်းလ at 7:39 PM
အစ်ကိုရဲ့ ရင်ဘတ်ကလာတဲ့ခံစားချက်အစစ်အမှန်တွေကို ညီလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ မြင်အောင်ကြည့်သွားပါတယ်။
လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ရှင်ဗျာ...
လေးနက်လွန်းတဲ့ ကဗျာလေးကို ပြန်လည်ဖတ်သူ အားလုံးလည်း ကျေနပ်နိုင်ကြမှာ အသေအချာပါပဲ...
ညီလေးရေ ဆိုပေမဲ့ ဒီက ညီမလေးလဲ ယုံတမ်းစကား မဟုတ်တဲ့ အကို့ ကဗျာကို ဖတ်ရင်း ရွှေရောင် နံနက်တွေကို မျှော်လင့်နေတာ ကြာခဲ့ပြီ..
အစ်ကို့ရင် ဘတ်ထဲက အတွေ့ကြုံတွေ အများကြီးနဲ့ ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ကဗျာလေးက ညီတို့အတွက် တကယ်ကို အဖိုးတန်တယ် အစ်ကိုရေ့ ။အင်း...အစ်ကိုပြောသလိုပေါ့ မဝေးတော့တဲ့ ကာလတစ်ခုမှာတော့............................. ကျနော်တို့တွေ ပျော်ကြအုံးစို့ဗျာ ။
အကြိုက်ဆုံးကဗျာတွေထဲက အနှစ်သက်ဆုံးနဲ့ အပြင်းထန်ဆုံး ကဗျာတစ်ပုဒ်လို့ဆိုပါစို့။ အဲဒီလိုကဗျာတွေကို ရူးပြီးတော့ တောခို၊ တယောက်တည်း ကြိတ်ပြီးငိုနေခဲ့တဲ့ အသဲနှလုံးများနဲ့ မြို့ပြလွမ်းချင်းတွေကို တကယ်ဟောင်ချလိုက်တယ်ပေါ့။
ကဗျာကို ကျနော့ ဘလောဂ့်မှာ ကူးယူဖော်ပြချင်တယ်ဗျာ အကြောင်းပြန်ပါ။